ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏အဆုံးမှာ Post-စစ်ပွဲကာလအတွင်းအမျိုးသမီးအဝတ်နီးပါးယောက်ျားသူတို့ထံမှကွဲပြားကြဘူး။ သို့သော်အမျိုးသမီးအဝတ်အစားတွေထဲမှာအနှစ် 50 အတွက်ဆွဲဆောင်မှု sexy, ဣတ္ကြည့်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။ ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေများအတွက်ပထမဦးဆုံးတွန်းအားအရှင်အမျိုးသမီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၏မခိုင်မြဲပုံနှင့်နူးညံ့ကြင်နာမှုဖို့ညွှန်ပြခြင်း, ကိန်းဂဏန်း၏သဟဇာတဖြစ်မှု, ကြော့နှင့်သနျ့ပြသသောဆင်မြန်းကြ၏။ ယနေ့စားဆင်ယင် 50 ၏စတိုင်လ်ထဲမှာကဒီစတိုင်တစ်ဦးဂန္ဖြစ်လာသည်သကဲ့သို့, အချိန်မော်ဒယ်များမှသည်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောမဟုတ်ဘူး။
စားဆင်ယင် 50s - တစ်တပ်ဆင် silhouette, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလေးပေးယဉ်လိုင်းများရင်ဘတ်-ခါး-တင်ပါးစှနျးကိုအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟု။ ဤအမော်ဒယ်များ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်တစ်ခုစတိုင် "hourglass" ဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ဤသည်စားဆင်ယင် - အားလုံး၎င်း၏ပုံစံများအတွက်ဣတ္၏မှတ်ပုံတင်။ ယင်းသို့ချောချောမွေ့မွေ့ရောစပ် lateral လိုင်း coquette, အပြည့်အဝစကတ် utjazhki ခါးပါးလွှာချောနှင့်အတူ။ စကတ်-ခေါင်းလောင်းနောက်ထပ်ခါးအလေးပေးသောတင်ပါးမှခါးမှာအနည်းငယ်ပိုမိုနီးကပ်စွာကိုလျှော့ချသည့် 50s ရဲ့ style အတွက်ဆင်မြန်း၏မော်ဒယ်များ၌တည်၏။ ဒါကစတိုင်သူတို့ရဲ့မွေခံရသောသူကိုအလှဆင်, ဒါပေမယ့်လည်းဿုံတင်ပါးအတွက်မဆိုချို့ယွင်းချက်ဖုံးကွယ်မသာ။
ထို့အပြင် 50 ၏စတိုင်မော်ဒန်ပေါ့ပေါ့ဆင်မြန်းကွဲပြားခြားနားသောသဘာဝအပိတ်ထည်။ လွယ်ကူသောမြက်ခင်း, ဇာထပ်ပုံစံမျိုးတွေနဲ့အလှဆင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောပိုးသို့မဟုတ်ပိတ်ချော, အဆင်းလှဆက်စပ်ပစ္စည်း။
ခိုင်မြဲစွာမော်ဒယ်များအတွက်အမြစ်တွယ် style 50-ies ညနပေိုငျးဖက်ရှင်ဝတ်စားဆင်ယင်။ ညဦးယံအချိန်စားဆင်ယင် 50s - ပခုံးနှင့်အထက်ရင်ဘတ်ပေါ်အာရုံစူးစိုက်, ပထမဦးဆုံးနှင့်အဓိကဖြစ်ပါသည်။ ဤအမော်ဒယ်များအများစုမှာမကြာခဏတစ်ကြော့ဘဲဥပုံအသွင်သဏ္ဌာန်ရှိပြီးဖြစ်သောထမ်းဘိုးကို sleeveless သို့မဟုတ် Low-ဖြတ် neckline, အလှဆင်နေကြပါတယ်။ ဒါကစိတ်ကူးလည်ပင်းအပေါ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလှဆင်တငျပွနိုငျ။ ဒါ့အပြင် fluffy စကတ်ကွာခြား 50s output ကိုဝတ်စားဆင်ယင်။ multi-အလွှာလှပသောဖဲအောက်မှာ tulle သို့မဟုတ်အခြားလှပသောပိတ်ထည်အများဆုံးအမှတ်ရစရာများနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလမ်းကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပူနွေး fluff သို့မဟုတ် padding ကို polyester နှင့်အတူ?
မိန်းကလေးအရုပ် Anastasia Shpagin
အနီရောင်အင်္ကျီကို - တစ်ဦးပဝါ?
မိန်းမတို့အဘို့နွေရာသီဖိနပ်ကို 50 နှစ်ကြာ
Eyelets အပေါ် tulle
Alec Baldwin ရှုပ်ထွေးပြီးစစ်ဆင်ရေးခံစားခဲ့ရ
အဆိုပါ Basal အပူချိန်ကိုတိုင်းတာရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Herve Leger စားဆင်ယင်
ဆုတောင်းပဌနာ Cyprian နှင့် Ustinov စုန်းကနေ
နို့ pudding - စာရွက်